डाउनटाउन डचटाउन • डचटाउनस्टा.लि..org मा सेन्ट लुइस मेन स्ट्रीट्स इनिसिएटिभ
डाउनटाउन डचटाउनमा सेन्ट लुइस मेन स्ट्रिट्स पहल
सेन्ट लुइस मेन स्ट्रिट्स डाउनटाउन डचटाउनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, र वातावरणीय कल्याण बृद्धि गर्न एक पहल हो। कार्यक्रम बीचको साझेदारी हो DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, को डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, मिसौरी मुख्य सडक जडान, र सेन्ट लुइस शहर, र मिसौरी मा यो प्रकारको पहिलो हो।
अर्को केहि बर्षहरूमा, डीटी २, द सीआईडी, र MMSC डाउनटाउन डचटाउनमा जीवनशक्ति ल्याउने योजना विकास गर्नेछ, जुन सामान्यतया ग्रान्ड र ब्रडवे बीच मेरैमेक स्ट्रिटको साथसाथै क्षेत्र मानिन्छ, साथै दक्षिण ग्रान्ड र भर्जिनियाको साथ अतिरिक्त वाणिज्यिक कोरिडोरहरू। योजना मिसुरी मेन स्ट्रीट को उपयोग गर्दछ चार बुँदा दृष्टिकोण: संगठन, आर्थिक जीवन, डिजाइन, र पदोन्नति।
डचटाउन अर्बनमेन योजना क्षेत्रको अनुमानित पदचिह्न।
सेन्ट लुइस मेन स्ट्रिट्स पहल डचटाउनको वर्तमान र भविष्यमा निहित चासोको साथ बासिन्दा र पेसेवरहरूद्वारा निर्देशित छ। आगामी महिना र बर्षहरूमा, हामी अतिरिक्त प्रतिक्रिया भेला गर्न र यस रोमाञ्चक कार्यक्रममा भाग लिन अवसरहरू प्रदान गर्न घटनाहरू र बैठकहरू होस्ट गर्नेछौं।
मुख्य सडक चार-पोइन्ट दृष्टिकोणबाट, डचटाउन संगठनले चार समिति गठन गरेको छ। समितिहरू — डिजाइन (एक सुरक्षित, सफा, र ग्रीन उपसमिति सहित), आर्थिक जीवन शक्ति, पदोन्नति, संगठन, र सुरक्षित स्वच्छ र ग्रीन the DT2 र डचटाउन सीआईडी ​​बोर्डलाई रिपोर्ट गर्दछ। कमिटिहरु समुदायका सदस्यहरु मिलेर बनेको छ जसले डचटाउनलाई सबैका लागि उत्तम छिमेकको लागि मार्गनिर्देशन र कार्य सम्पादन गर्दछ। तपाईं समितिका बारे अधिक जान्न र साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/ कमिटीहरू.
शहरी मुख्य कार्यक्रमको भागको रूपमा, DT2 र डचटाउन CID ले भाडा लिनेछ डचटाउन ग्रोथ प्रबन्धक। ग्रोथ म्यानेजरले समुदायको साथ संलग्न हुन र मिसौरी मेन स्ट्रिटको चार सूत्री दृष्टिकोण लागू गर्न मद्दत गर्दछ।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुन 18th, 2021 .
डचटाउन STL.org डाउनटाउन डचटाउनमा सेन्ट लुइस मेन स्ट्रिट्स पहल